Angletera: Rahalahy sy anabavy faly mandray an’ireo solontena hanatrika fivoriambe iraisam-pirenena
MPONINA 743 421 605
MPITORY 1 614 244
FAMPIANARANA BAIBOLY 842 091
Diso hevitra ka nahazo mpianatra Baiboly
Nisy fivoriambe iraisam-pirenena tany Londres, any Angletera. Fotoana nahafaly izy io na ho an’ireo solontena avy any an-tany hafa na ho an’ireo Vavolombelona teo an-toerana. Nankao amin’ny hotely iray i Andrew sy Elizabeth, satria te hiarahaba an’ireo vahiny. Nahita vehivavy iray nanao metimety i Elizabeth teo amin’ny fandraisana olona, ka tonga dia niarahaba sy namihina azy. Gaga ilay vehivavy ka tsy maintsy niala tsiny i Elizabeth. Hoy izy: “Azafady fa noheveriko hoe anisan’ireo solontena ianao.”
“Solontena amin’ny inona?”, hoy ilay vehivavy.
Notondroin’i Elizabeth ilay soratra fiarahabana ny Vavolombelon’i Jehovah, teo amin’ny fandraisana olona, ary gaga izy fa niteny ilay vehivavy hoe: “Tsara kosa ko! Angaha hoatran’ny an’ny Vavolombelon’i Jehovah ny paoziko?”
Nitohy ny resak’izy ireo, ka lasa fantatr’i Elizabeth hoe Vivien no anaran’ilay vehivavy, Nizerianina izy, ary mifanakaiky ny tranon-dry zareo. Nanaiky hianatra Baiboly i Vivien ary tiany hianatra koa ny zanany. Nitsidika azy tany an-tranony i Andrew sy Elizabeth, ary izy ireo indray no noarahabaina sy nofihinina. Nisy vokany tsara teo amin’i Vivien ilay izy ireo nihaona tampotampoka tany Londres. Nasehon’izy mivady an’i Vivien ny boky Ampianarina. Hay, hono, izy efa manana an’io boky io sady efa namaky azy io tamin’ny zanany efatra. Rehefa niteny izy mivady hoe natao hianarana Baiboly maimaim-poana izy io, dia faly erỳ izy nilaza hoe: “Andao hatomboka izao dia izao!”
Taratasy avy amin’ny rahalahy iray
Lasa nisy fiangonana miteny rômania tany Slovakia, tamin’ny Novambra 2014. Nisy fivoriamben’ny faritra tany vao haingana, ary mpitory 21 miteny rômania no natao batisa. Iray tanàna daholo izy ireo. Nahatratra 495 ny mpanatrika Fahatsiarovana tao amin’ilay fiangonana vaovao. Nanoratra toy izao ny rahalahy iray vao vita batisa:
Slovakia: Mpitory roa faly mitory ny vaovao tsara amin’ny vehivavy rôma
“Rôma aho ary mipetraka eto Žehra, atỳ Slovakia. Mihevitra ny fotsy hoditra hoe voretra izahay sady mpandainga sy mpangalatra. Nisy fotoana aho te hiangona, nefa niteny ilay mpiambina fiangonana hoe tsy mpivavaka ao aho ka tokony handeha. Azonareo an-tsaina angamba hoe nahoana aho no tsy tia fotsy hoditra. Nanasa ahy ho any amin’ny Efitrano Fanjakana ny Vavolombelon’i Jehovah, tatỳ aoriana. Nandeha aho sady nanahy ihany hoe ho diso fanantenana indray. Mbola tsy tafiditra tao amin’ny efitrano akory anefa aho dia efa nisy lehilahy fotsy hoditra nandray ny tanako sady faly niarahaba ahy tonga soa. Tsy nifantoka mihitsy aho nandritra ny lahateny fa nieritreritra hoe: ‘Maninona àry no tsara fanahy amiko daholo ny olona ato?’
“Tsy nahita tory aho ny alin’iny fa nieritreritra an’ilay zava-nitranga tany amin’ny efitrano. Tapa-kevitra ny hiverina tany àry aho, sao dia mba sendra tsara fanahy tamiko fotsiny ny olona tamin’iny. Vao mainka anefa ry zareo tsara fanahy tamiko sady nataony hoatr’ireny namany efa ela ireny aho. Nivory foana aho, dia natao batisa tamin’ny farany. Mbola tsara fanahy tamiko ireo rahalahy, taorian’izay, sady mihevitra ahy ho sarobidy foana. Sakafo tsara noho ny haniny mahazatra aza no arosony ahy indraindray. Tsy te hiala amin’ny fandaminana mihitsy aho, ary i Jehovah no tiako hotompoina mandrakizay.”
Mipetraka any Azerbaïdjan i Aysel, ary nandeha bisy izy indray andro. Noresahiny tamin’i Jehovah hoe mba te hitory izy eny an-dalana. Efa nanana toerana izy tao anatin’ilay bisy, nefa nangataka azy hipetraka teo akaikiny ny ramatoa iray. Nanomboka niresaka taminy i Aysel, ary afaka nitory ihany tamin’ny farany. Nilaza ilay ramatoa hoe tia an’i Jesosy izy ary te hahalala azy bebe kokoa. Nifanome nomeraon-telefaonina izy ireo ary nifanao fotoana. Nasain’ilay ramatoa nitondra Baiboly ho azy koa i Aysel, raha azo atao.
Nitsidika an’ilay ramatoa tany am-piasany i Aysel, tatỳ aoriana. Nilaza ilay ramatoa hoe mamaky “bokim-bavaka” izy isan’andro. Hay ny Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro tamin’ny 2013 ilay izy. Lasa nianatra Baiboly izy, ary faly i Aysel fa nanampy azy ho sahy hitory tsy ara-potoana i Jehovah.
Taratasy fisaorana avy amin’ny voafonja iray
Avy any Espaina ity taratasy ity:
“Tiako aloha ny hisaotra anareo satria miezaka mitory amin’ny karazan’olona rehetra ianareo.
“Tany Tirana, any Albania, aho no niresaka voalohany tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah, 15 taona lasa izay. Gaga aho hoe nisy Vavolombelona sahy nanatona anay, nefa izahay jiolahy folo nirongo fiadiana. Sahy niresaka taminay io rahalahy io, nefa tsy nisy olon-kafa nahavita an’izany. Tsy natahotra nitory taminay izy. Tena nampiaiky ahy ny herim-pony.
“Migadra eto Espaina aho izao. Nisy Vavolombelona nitsidika ahy tatỳ am-ponja, efa-taona lasa izay, ary nanasa ahy hianatra Baiboly. Nanaiky aho ary niova nanomboka teo. Tsy mahery setra intsony aho. Efa aman-taonany aho izao no tsy niady tamin’olona intsony. Lasa misy dikany ny fiainako rehefa nahalala an’i Jehovah aho. Miezaka mihavana amin’ny olon-drehetra aho, ary efa herintaona mahery aho izao no mpitory tsy vita batisa.
“Efa 12 taona aho izao no nigadra. Sambatra sy milamin-tsaina anefa aho tato anatin’ny efa-taona, fa tsy hoatran’ny taloha. Misaotra an’i Jehovah isan’andro aho noho izany.
“Nijery video tao amin’ny jw.org aho, herinandro vitsivitsy lasa izay. Nanohina ny foko ilay video momba ny rahalahy iray nigadra tany Etazonia. Tsy olona be fihetseham-po aho, nefa tsy tanako ny ranomasoko rehefa hitako ny fiovana nataony.
“Hita hoe miezaka mitory amin’ny karazan’olona rehetra ianareo, ka mandika ny vaovao tsara amin’ny fiteny be dia be sady mitsidika ny atỳ am-ponja. Enga anie ka hanohana anareo foana i Jehovah.
“Misaotra betsaka anareo!”
“Ela ny ela ka nilamin-tsaina ihany aho”
Hoy i Felicity, vehivavy 68 taona mipetraka any Soeda: “Tsapako hoe tsy nisy dikany ny fiainako sady tsy nisy tanjona. Te hilamin-tsaina aho nefa hoatran’ny tsy nety mihitsy.” Tsy afa-po tamin’ny fampianaran’ny Katolika i Felicity, ka nanomboka nandalina ny fampianaran’ny fivavahana maro. Lasa nilalao ody sy nanao sikidy izy tamin’ny farany.
Kivy be izy rehefa nahatsapa hoe tsy nisy dikany ny fiainany, ka saika hamono tena. Hoy izy: “Sady nitomany aho no niantso mafy an’Andriamanitra mba hanoro ahy izay tokony hataoko. Nisy nandondòna tao am-baravarako, tapa-bolana taorian’izay. Tovolahy iray nitsikitsiky no tao ary nanontaniany aho raha te hihaino ny Tenin’Andriamanitra. Hoy aho tany an-tsaiko tany: ‘Andriamanitra ô! Tsy ny Vavolombelon’i Jehovah ange no notadiaviko e!’”
Saika hakatony avy hatrany ny varavarana, nefa nihaino ihany izy ary nanaiky hianatra Baiboly tamin’ny boky Ampianarina. Hoy izy: “Vaovao tamiko ny zavatra noresahiny momba ny Baiboly.” Natao batisa tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra i Felicity, tamin’ny 2014. Hoy izy tatỳ aoriana: “Ela ny ela ka nilamin-tsaina ihany aho. Efa ela no nitadiavako an’izany.”